WARBIXIN: 30 Saxiix Ee Ugu Waaweyn Ee La Sameeyay Suuqii Xagaaga – Kooxda.com
HomeSuuqaWARBIXIN: 30 Saxiix Ee Ugu Waaweyn Ee La Sameeyay Suuqii Xagaaga
WARBIXIN: 30 Saxiix Ee Ugu Waaweyn Ee La Sameeyay Suuqii Xagaaga
September 1, 2021 Abdiwali Adan Jamac Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 1
Waxa maanta lagu jiraa maalintii ugu dambaysay suuqa kala iibsiga xagaaga waxana ay kooxaha waaweyn isha ku hayaan sidii ay u samayn lahaayeen saxiixyo cusub.
Waxa jira kooxo suuqa galiyay haatanba lacag aad u badan si ay u xoojiyaan kooxohooda ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub si ay koobab ugu tartamaan xilli ciyaareedka dambe.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa saxiixyada ugu waaweyn ee la sameeyay intii uu furnaa suuqa kala iibsiga xagaaga.
1.Cristaino Ronaldo -> Man United
Kooxda Man United ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in uu ay dib ula soo saxiixdeen xiddiga Cristaino Ronaldo kaas oo ay kala soo wareegeen kooxda Juventus.
Kooxda Man United ayaa xaqiijisay in uu Cristiano Ronaldo ku soo laabtay kooxda kadib markii uu qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu ku joogi doono Old Trafford.
2.Aaron Ramsdale -> Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa Goolhaye Aaron Ramsdale kaas oo ay kala soo wareegtay lacag dhan Sheffield United.
Arsenal ayaa Aaron Ramsdale ka soo bixisay lacag dhan 24 milyan oo euro iyaga oo ka dhigay saxiixoodii 5-aad ee intii uu furnaa suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxda Arsenal ayaa xaqiijisay in uu Goolhaye Aaron Ramsdale qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu ku joogi doono kooxda ku ciyaarta Emirates.
3.Martin Odegaard -> Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga Martin Odegaard kaas oo ay qaab toos ah ugala soo wareegeen kooxda Real Madrid isaga oo qalinka ku duugay heshiis wakhti dheer ah.
Xiddiga khadka dexe ee Martin Odegaard ayaa ku soo laabtay Arsenal kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu ku soo bandhigay intii uu amaahda ku qaatay qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
4.Romelu Lukaku -> Chelsea
Kooxda chelsea ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga Romelu Lukaku kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Inter Milan.
Chelsea ayaa Romelu Lukaku ka dhigtay saxiixeeda ugu horeeya suuqa xagaagan iyaga oo ka dhigtay xiddigeeda ugu qaalisan taariikha Blues.
Chelsea ayaa Lukaku ka saxiixatay heshiis uu kooxda ku joogi doono ilaa xagaaga 2026 taas oo la macno ah in uu qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu ku joogi doono Stamford Brdige.
5.Lionel Messi -> PSG
Kooxda PSG ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga Lionel Messi kaas oo ay qaab xor ah ugala soo wareegtay kooxda PSG.
PSG ayaa Lionel Messi la gaadhay heshiis Rasmi ah saacado ka hor waxana ay haatana bareheeda bulshada ku soo bandhigtay muuqaal ay ku soo dhawaynayso xiddiga Lionel Messi.
6.Jack Grealish -> Man City
Kooxda Man City ayaa xaqiijisay in uu Xiddiga Jack Grealish kooxda u xidhan doono No.10 xilli ciyaareedka cusub kadib markii uu lacag rikoodh ah ugu biiray kooxda.
Xiddiga 25 jirka ah ayaa qalinka ku duugay heshiis 6 sano ah maanta oo khamiis ah kulana joogi doono kooxda ilaa xagaaga 2027.
Xiddiga ayaa noqday xiddiga ugu qaalisan taariikhda suuqa kala iibsiga ee xiddigaha reer England kadib markii ay Man City ka bixisay lacag rikoodh ah oo dhan 100 milyan oo euro si ay u hesho saxiixiisa.
7.Ben White -> Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga daafaca ka ciyaara ee Ben White kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Brighton.
White ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu kula joogi doono kooxda Arsenal isaga oo ku biiray saxiixyada ugu qaalisan ee taariikhda kooxda Arsenal.
8.Marcus Bettinelli -> Chelsea
Kooxda chelsea ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa Goolhaye Marcus Bettinelli kaas oo kooxda kaga soo biiray Fulham.
Goolhayaha ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu ku joogi doono Blues isaga oo sidaas ku noqday saxiixii ugu horeeyay ee kooxda chelsea xagaagan.
Goolhaye Marcus Bettinelli ayaa chelsea kaga soo biiray kooxda Fulham oo uu qaab xor ah uga yimid kadib markii uu dhacay heshiiskiisa kooxdaas.
9.Raphael Varane -> Man United:
Kooxda Man United ayaa ugu dambayn si Rasmi ah u xaqiijisay in ay kooxda Real madrid kala heshiisay saxiixa daafaca dhexe ee Raphael Varane.
Man United ayaa sheegtay in dhamaystirka saxiixa ka dhamintahay tijaabada caafimaadka oo uu maro xiddiga Raphael Varane iyo waliba in la dhamaystiro xog yar oo ka dhiman saxiixa xiddiga.
10.Jadon Sancho -> Man United:
Man United ayaa ugu dambayn ku dhawaaqday saxiixa Jadon Sancho oo ay muddo dheer ku raad joogtay saxiixiisa kana doonaysay kooxda Borussia Dortmun.
Man United ayaa si Rasmi ah u soo bandhigtay saxiixa xiddiga shalay jimcihii isaga oo qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu kooxda kula joogi doono.
Sancho ayaa kooxda Man United u xidhan doona Lambarka No.25 kadib markii uu Edinson Cavani diiday in uu baneeyo Lambarka No.7 oo uu isagu haatan xidho.
11.Albert Sambi Lokonga -> Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Albert Sambi Lokonga kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda reer Belguim ee Anderlecht.
Arsenal ayaa xaqiijisay in uu xiddiga 21 jirka ah ee Albert Sambi Lokonga uu qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu ku joogi doono kooxda Arsenal
Xiddiga reer Belguim ayaa kooxda u saxiixay heshiis ilaa xagaaga 2026 isaga oo sidoo kale kooxda u xidhan doona Lambarka No.23 sida ay xaqiijisay kooxda Arsenal.
12.Olivier Giroud -> Ac Milan:
Kooxda Ac Milan ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga weerarka ka ciyaara ee Olivier Giroud kaas oo ay kala wareegtay kooxda chelsea.
Kooxda Ac Milan ayaa Olivier Giroud ka bixisay 1 milyan oo euro iyo waliba lacag hal milyan oo kale oo Guno ah oo ku xidhan qaab ciyaareedka xiddiga.
Olivier Giroud ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu kula joogi doono kooxda Ac Milan isaga oo ka garab ciyaari doona Ibrahimovic kaas oo kooxda u ciyaara.
13.Gianluigi Donnarumma -> PSG
Kooxda PSG ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Goolhaye Gianluigi Donnarumma kaas oo kooxda kaga soo biiray Ac Milan kadib markii uu dhacay heshiiskiisa kooxdu.
Goolhayaha 22 jirka ah ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu kooxda reer France ku joogi doono ilaa xagaaga 2026 isaga oo noqday saxiixii ugu dambeeyay ee kooxda PSG.
Goolhaye Gianluigi Donnarumma Ayaa ugu biiray kooxda PSG Qaab xor ah kadib markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray kooxda reer Italy ee Ac Milan oo uu ku qaatay muddo ku dhaw 8 sano.
14.Nuno Tavares -> Arsenal
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga daafaca Bidix ka ciyaara ee Nuno Tavares kaas oo ay ka dhigtay saxiixeedii ugu horeeyay.
Xiddiga Tavares ayaa Arsenal kaga soo biiray kooxda Benfica waxana uu noqday saxiixii ugu horeeyaya ee ay Arsenal samayso inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xaaagan.
Gunners ayaa heshiis wakhti fog ah ka saxiixatay xiddiga kaas oo uu kooxda ku joogi doono kadib markii uu qalinka ku duugay heshiiska.
15.Sergio Ramos -> PSG
Kooxda PSG ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga daafaca Sergio Ramos kaas oo ay qaab xor ah ugala soo wareegtay kooxda Real Madrid.
Ramos ayaa qalinka ku duugay heshiis 2 sano ah oo uu ku jogi doono kooxda ka dhisan caasimada France isaga oo noqday saxiixii weynaa ee 2-aad ee ay kooxdu samaysay suuqa xagaagan.
Sergio Ramos ayaa ku biiray kooxda PSG kadib markii uu dhamaaday heshiiskiisii kooxda Real Madrid kadib 16 sano oo uu ku qaatay kooxda Los Blancos.
16.Achraf Hakimi -> PSG
Kooxda PSG ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa daafaca Achraf Hakimi kaas oo ay kala wareegtay kooxda Inter Milan.
Kooxda reer France oo sii wada is adkaynta suuqa xagaagan ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga reer Morocco kaas oo kaga soo biiray Inter Milan.
PSG ayaa saxiixa xiddiga Achraf Hakimi ku garaacday kooxda Chelsea waxana uu qalinka ku duugay heshiis ilaa xagaaga 2026 ah kadib markii uu ku baasay tijaabada caafimaadka.
17.Tom Heaton -> Man United:
Kooxda Man United ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixeedii 2-aad ee suuqa xagaaga iyaga oo dhamaystiray saxiixa Goolhayaha Tom Heaton.
Goolhaye Tom Heaton ayaa qalinka u duugay heshiis ilaa xagaaga 2023 ah isaga oo noqday saxiixii 2-aad ee ay kooxdu ku dhawaaqdo saacado gudohood kadib markii ay shalay ku dhawaaqday saxiixa Jadon Sancho.
Goolhayaha ayaa kooxda Man United ugu soo biiray qaab xor ah kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula joogay kooxda Aston Villa dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore.
18.Jadon Sancho -> Man United
Kooxda Man United ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay Heshiis Rasmi ah la gaadhay Borussia Dortmund si ay uga hesho saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara ee Jadon Sancho.
Dhamaystirka heshiiska ayaa haatan u dhasantahay tijaabada caafimaadka maadama uu jadon Sancho ka qayb qaadanayo tartanka Euro 2020 oo uu u matalayo tijaabada caafimaadka.
Laakiin Man United ayaa Dortmund kala heshiisay saxiixa xiddiga iyada oo uu xiddiga 21 jirka ah qalinka ku duugi doono heshiis ilaa xagaaga 2026 ah.
19.Memphis Depay -> Barcelona
Kooxda Barcelona ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga Memphis Depay kaas oo qaab xor ah ugu soo biiraya kooxda 30 bisha June.
Xiddiga 27 Jirka ah ayaa qalinka ku duugay heshiis uu ku joogi doono kooxda Barcelona ilaa xagaaga 2023 isaga oo rumeeyay riyadiisa ah in uu ku biiro kooxda Barcelona.
20.Fikayo Tomori -> Ac Milan
Kooxda Ac Milan ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay heshiis 4 sano ah ka saxiixatay daafaca dhexe ee Fikayo Tomori kaas oo ay qaab toos ah ugala wareegtay kooxda Chelsea.
Fikayo Tomori ayaa heshiis amaah ah ku qaatay Ac Milan xilli ciyaareedkii dhamaaday waxana uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo kooxda ka caawiyay in ay u soo baxdo champions leaue xilli ciyaareedka dambe.
Ac Milan ayaa haatan xaqiijisay in ay qaab toos ah ugala wareegtay xiddiga kooxda Chelsea iyada oo uu Fikayo Tomori kooxda sii joogi doono ilaa xagaaga 2025.
21.Georginio Wijnaldum -> PSG
22.Emerson Royal -> Barcelona:
23Eric Garcia -> Barcelona
24.Sergio Aguero -> Barcelona
25.David Alaba -> Real Madrid
26.Ibrahima Konate -> Liverpool:
Liverpool ayaa haatan si Rasmi ah u xaqiijisay in uu xiddiga 22 jirka ah qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah sidaasna ku noqday saxiixii ugu horeeyay ee suuqa xagaagan.
27.Saul Niguez -> Chelsea:
Chelsea ayaa qaab amaah ah kula soo saxiixatay xiddiga khadka dhexe ee Niguez kaas oo ay kala soo wareegeen kooxda Atletico Madrid iyaga oo maalintii ugu dambaysay suuqa dhamaystiray saxiixa xiddiga.
28.Antoine Griezmann -> Atletico Madrid
Xiddiga Antoine Griezmann ayaa qaab amaah ah ugu biiray kooxda Atletico Madrid kadib markii ay kooxaha Barcelona iyo Atletico ka heshiiyeen saxiixa xiddiga reer France kaas oo ku laabtay kooxdiisii hore.
29.Eduardo Camavinga -> Real Madrid
Kooxda Real Madrid ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Eduardo Camavinga kaas oo ay kala soo saxiixatay Kooxda Rennes.
Xiddiga khadka dhexe ayaa Real Madrid ugu soo biiray lacag dhan 30 milyan oo euro waana saxiix lama filaan ku noqday dhamaan taageerayaasha Los Blancos marka la eego in ay kooxdu aad u doonaysay saxiixa xiddiga Kylian Mbappe.
Kooxda Real Madrid ayaa xiddiga 18 jirka ah ka saxiixatay heshiisk 6 sano ah oo uu ku joogi doono ilaa xagaaga 2027 isaga oo sidaas ku noqday saxiixii 2-aad ee ay Real Madrid samaysay xagaagan.
30.Takehiro Tomiyasu -> Arsenal:
Kooxda Arsenal ayaa xiddiga reer Japan ee Takehiro Tomiyasu ka dhigtay saxiixeedii ugu dambeeyay ee suuqii xagaaga iyaga oo xiddiga ka soo bixiyay 20 milyan oo euro si ay ugu xoojiyaan daafaca Midig.
Sii Akhriso: Arimaha Gacaliyahaaga Ka Fogayn kara Adduunkaaga, Midka Ugu Dambeeya Ayaa Ugu Halisan
Cristiano Ronaldo Oo Kashifay Qofkii Furaha U Ahaa Ku Soo Laabashadiisa Old Trafford
YAAB: Yaab Saddexda Saxiix Ee Cusub Ee Man United Oo Kaligood Ka Mushahar Badan Kooxo Badan Oo Premier League Ah.
Waxan idnka hayna 29 ciyar yahan kan 30 naad aawayheee wayoo sanjo ayad laba jeer kuso celiseen
Cristiano Ronaldo Oo Jabiyay Rikoodh Kale, Zlatan Ibrahimovic Ayuu Markan Dhaafay.